Haweenka Nder: Dagaal yahaniinta reer Senegal ee addoonsiga u haysta addoonsiga - Afrikhepri Fondation
Khamiis, Sebtember 17, 2020
Haweenka Nder: Weydiista Senegal ee addoonsiga
VTani waa xaqiiqo naxdin leh oo naxdin leh oo in muddo ah lagu xasuusto Senegal. Sheekada haweenka Nder, ee salaasadii Noofambar 1819, naftooda u huray si wada jir ah si ayan ugu dhicin gacanta addoommo Moorish.
Tallaabo wanaagsan oo iska caabin ah oo lagu salaamayo, si geesinimada mudanayaashan weligood loo iloobi doonin…
Boqortooyada Afrika iyo geesiyaasha qurbaha madow
Waqtigaas, Walo waxay ahayd gobol barwaaqo ah oo ku yaal afka wabiga Senegal. Dadka deggan, beeralayda nabdoon, waxay ku noolaayeen ganacsiga ganacsigii ka soo gudbay Saharan-ka iyo dadkii ku sugnaa magaalada Saint-Louis, oo ah caasimaddii ugu horreysay ee gumeystaha Senegal, halkaas oo ay ku iibiyeen wax soo saarkii beeraha. Webiga wuxuu ka soocay Walo iyo Mauritania, halkaas oo qabiilka Trarzas si gaar ah loo aasaasay. Iyaga xaggooda, weligaa hore uma ogid inay u qalmaan inay macaamiil ahaan u kala wareegaan badeecada ama inay cadow isu dhigaan sidii maxaabiis ahaan. Xaqiiqadu waxay tahay tan iyo markii la aasaasay ciidamada Faransiiska ee Saint-Louis, Moors ma aysan joojinin cadaadiska ay ku hayaan Walo, oo ay rabeen inay ka gudbaan xukunkooda, si looga hortago gobolka inuu ku dhaco xukunka. Yurub.
Sannadkaas, muddo dheer oo xasillooni ah ayaa ka dambaysay iska hor imaadyo rabshado wata oo dagaalyahannada Moorish iyo xulafadooda Toucouleur ay mar labaad soo baxeen guul. Waxaan joognay bilowga xilliga qallalan Nder waxyar buu gaabis ahaa. Brack (Boqorka) wuxuu ku sugnaa Saint-Louis si loogu daaweeyo dhaawaca xun ee la helay intii lagu jiray dagaalka Ntaggar ee looga soo horjeeday Moors si sax ah. Sidii caadada u ahayd, marti sharaftii boqortooyada ayaa safarka ku jiray qayb wanaagsan oo fuushana way raaceen.
Talaadada maanta oo kale sida maalmaha kale, raggu waxay ku soo biireen beerta waaberiga, dabaasha (hoe dhaqameedka) garabka. Kuwa kale ayaa ugaarsanayay, halka koox saddexaad ay jihada jihada wabiga ay doonyahooda uga kalluumeysanayeen. Kaliya ceddos (askar) ayaa ku jiray xerada, waxayna ku mashquulsanaayeen si aan kala sooc lahayn u mideynta qoryahahooda waaweyn ee ganacsiga. Tuulada oo leh buul wareegyo ah oo la gaarsiiyay haweenka, carruurta iyo waayeelka, nolol maalmeedka ayaa xukumi jiray. Cayayaanka cayayaanka ah, wareega wareega, waxay sii laba jibaaraan rabitaankooda ah inay mashiinka minka ku shiraan. Dumarkii markay hawlahooda sii wadeen ayaa midba midka kale ugu yeeray meelahii lagu heshiiyay. Kuwa kale waxay ku mashquulsanaayeen hareeraha meerayaasha halkaasoo dalagii ugu dambeeyay lagu keydiyay. Qaar ayaa ugu dambeyntii aamusnaan ku wada sheekeeyay barxadda tuulada, halka carruurta yar-yar ay si xowli ah ugu daba ordeen geedka daarta, halkaas oo fiidkii, odayaashu ay ka sheekayn jireen sheekooyinka hore.
Si dhakhso ah qaylo cabsi ayaa carqaladeysay degenaanshaha meesha. Isla markiiba, qosolkii ayaa diiray, cayayaanka ayaa soo dhacay, dhimisyadii ayaa la baabi'iyey. Indhaha oo dhami waxay ku wareegeen haweeneyda hadda ku soo dhacday albaabka Tata, derbigaas oo ka samaysan laamo iyo dhoobada, oo loo maleynayay inay ilaalinayso tuulooyinka haddii ay dhacdo dagaal.
Waxay gacanteeda ku dhegtay calabash oo biyo ku qulqulaya, in kasta oo ay maran tahay waxa ku jira, haweeneydu way gariirtay, oo argagaxday: "Moorsadii!" Mooshinku waa jiraa! Way imanayaan! Waxaan joogay cidhifka balliga Guiers oo waxaan ku arkay daaqa. Ciidan Moors! Waxay wataan koox Toucouleurs ah oo uu hogaamiyo Amiir Amar Ould Mokhtar! Waxay ku dhow yihiin inay webiga ka gudbaan oo ay yimaadaan tuuladeena! "
Dumar oo dhammuna isku waqti bay ooyeen. Waxay ogaayeen waxa mustaqbalkoodu ku suganyahay ... Mooshinku wuxuu dib uga bilaabay howlagalkooda Walo si ay ugu kaydiyaan dadka asalka ah. Tiro aad u tiro badan oo rag, dumar iyo caruur ah ayaa la sheegay in laga soo kaxeeyey qoysaskooda si loogu iibiyo addoonsiga qoysaska hodanka ah ee Waqooyiga Afrika. Had iyo jeer sidan oo kale ayay ahayd oo Nder halkaas waxaa ku lumiyay wiilal iyo gabdho badan.
Dhanka kale, dhowr kiiloomitir oo fog, oo lagu dhajiyay dhinaca kale ee wabiga, rakaab duullimaadyada ka soo qaaday lamadegaanka ayaa isku diyaarinayay inay fardooskooda bilaabaan inay weeraraan tuulada. Haweenku waxay isla markiiba go’aansadeen inay abaabulaan iska caabin askartii halkaa joogtay.
Degdeg, waxay u direen carruurtii loo diray beerihii dariska la ahaa iyaga oo raacaya hoggaanka odayaashooda, si ay ugu dhuuntaan cawska dheer ee masago. Kadibna waxay ku soo ordeen guryahooda si ay uga soo baxaan iyagoo sita huwan boroous iyo surwaal jilicsan, oo ka yimid nin, aabihiis, walaalkiis; timo ayaa lagu qariyey guntimaha ragga. Waxay isu diyaariyeen waxkasta oo loo adeegsan karo difaacooda: jarjarka, warmaha, naadiyada iyo xittaa qoryaha dhabta ah ee ay iyagu waxka qaban lahaayeen markii ugu horeysay.
Amzons of maalin, haweenkan waxay la dirireen tamarta quusashada. Addoomada, dabadhilifyada, aristocrats, yar, da 'weyn, way hawlgaleen, kuna dhiirantahay geesinimadooda kaliya, markay la kulmayaan cadawga xun. Gabayadooda xuska ee lagu xasuusto haweenkan gaarka ah, geesiyaasha, sawir qaadayaasha bogagga taariikhda Afrika, waxay xaqiijinayaan in maanta ay dileen in ka badan saddex boqol oo Moors. Dagaalku wuxuu ahaa mid aan sinnayn, si kastaba ha ahaatee. Ceddos si dhakhso leh ayaa loo baabi'iyey. Degmooyinka dhiiga xumbada ku fiday dhoobo guduudan dhulka. Halkan iyo halkaas waxaa ku dhintay maydadka mayd dhimanaya oo dhaawacmay.
Markii loo eego go'aan adag oo ka soo badbaaday waarayaasha, in kasta oo ay hub qaateen, ay tiro ahaan aad uga sarreeyeen tiirarka cadowga, ayuu Amiir Ould Mokhtar oo madax u ah bilaabay in ciidamadiisa la kala qaado. Kuwa raacda cidlada waxay iska saaraan sababahooda caatada ah, waxay soo qaateen muruqyadoodii dhaawacan oo mar labaad ayay gudbeen harada. Madaxa Vidaha Moorish wuxuu ogsoonyahay inay ilaalinayeen dumarka fudud, si kastaba ha ahaatee, uma adkeysan karaan waqti dheer in kasta oo geesinimadooda ay jirto. Isaga oo aan dooneyn inuu waxyeello u geysto "badeecada", wuxuu damacsanaa inuu xoogaa yar dib u soo noqdo, si uu ugu noolaado iyaga si ay u helaan qiimo ka wanaagsan suuqyada addoonsiga.
Haweenka Walo waxay dareemeen lumis ... Dhamaadka xooggoodii, ma aysan taageeri karin weerar labaad. Nimanku way wada baabba'een oo farriintii, oo orod ugu raadinaysay caawimaad, ayaa hubaal ah inuu soo daaho. Rajada oo dhan waxay ahayd wax aan waxtar lahayn.
Nder dumarka! Gabdhaha Walther Walo! Qalabixi oo cusboonaysiiso lakabkaaga!
Waxay ahayd markaa in cod ka kaco oohinta, baroorta iyo qaylada xanuunka. Waxay ahayd Mbarka Dia, aaminaada luqadda (boqoradda) Faty Yamar. Keli iyada ayaa garaneysa sida loo adeeci karo maamulayaasha awooda iyo awoodda leh ee hareereeyay boqoradda. Iyada oo u fiirsaneysa geedka daarta, maxaa yeelay iyada lafteeda ayaa la dhaawacay, waxay bilaabatay inay caadeysato asxaabteeda:
"Haweenka Nder!" Gabdhaha mudan ee Walo! Toosi oo xir xirmooyinkaaga santuuqyada! Aynu diyaar u nahay inaan dhinto! Haweenka Nder, miyaynu markasta ka laabanaa kuwa soo duulay? Raggayagu waa fog yihiin, kamana maqal qayladayada. Caruurteenu waa amaan. Ilaaha Qaadirka ah ayaa awoodi doona inuu ilaaliyo. Laakiin annaga, haweenka saboolka ah, maxaan ka qaban karnaa cadawyadan naxariis darada ah oo dhawaan dib u bilaabi doona weerarka? "
"Xagee baan ku qarin karnaa iyagoon na helin?" Waa nala qabsan doonaa sidii hooyooyinkeen iyo ayeeyadeen horaba ahaan jireen. Waxaa nala jiidi doonaa webiga oo waxaa nala iibin doonaa sidii adoomo. Miyay taasi qaddarin noo mudan tahay? "
Oohintu way joogsatay, cabashooyinkii ayaa noqday kuwo la carrab-laabay ... "Jawaab! Laakiin ka jawaab halkii aad istaagi lahayd murugada! Maxaad ku leedahay xididada dhiigaagu? Dhiig ama gadaal? Miyaad door bidaysaa inaan mar dambe dhahno carruurteenna ayeeyadayada iyo faracyadoodii: Awowyadaadii ayeeyadood waxay ka baxeen tuulada iyagoo maxaabiis ah? Amase haddii kale: Awowayaashiin way dhiiradeen ilaa dhimashadii! "
Geeri! Ereygan, dhagar jilicsan ayaa yimid. "Dhimasho! Maxaad dhahdaa Mbarka Dia? "Haa, walaalahay. Waa inaan u dhinno sidii haween xor ah, oo aannaan u noolaanin sidii adoomo. Ha ogolaadeen kuwa igu raacsan sanduuqa weyn ee Golaha caqliga leh. Dhammaanteen waan geli doonnaa oo dab baan qabadsiinaynaa ... Waa qiiqa dambaskeenna soo dhoweyn doona cadaawayaasheenna. Istaag walaalahay! Maaddaama aysan jirin wado kale oo looga baxo, waxaan u dhimanaynaa sida haweenka reer Walo oo kale! "...
Qorraxdu hadda waxay ku jirtay cirka sare. Aamusnaan cabsi leh ayaa ku dhacday tuulada. Meel quus ka joog, haweenku si tartiib tartiib ah ayey ugu dhaqaaqeen buulkii weynaa ee kacay, lagana soo rogay badhtamaha tuulada. Midkood kuma dhicin inuu ka hor tago Mbarka Dia, cabsi laga qabo in codka nacasnimadooda uu ka tarjumayo carruurtooda. Markii ugu dambeysay ee ay ka fiirsadaan qurxinta caadiga ah ee nolol maalmeedkooda, ha u ogolaato indhahooda ilmada ku jiidaya digaagga naxdinta leh, buundooyin bililiqeystay, dilaacyo dhulka lagu tuuray, dheryo la tuuray, buullo jabay iyo dhammaan maydadkii ehelka ee bilaabayay. inuu bararo saameynta kuleylka…
Markaa waxay ku uruuriyeen sanduuqa weyn. Qaar ka mid ah hooyooyinka da'da yar ee aan dooneynin inay ka soocaan carruurtooda dhashey, ayaa ku xiray naasahooda, si ay u nuugaan. Kii ugu dambeeyay ee qolka soo gala wuxuu ahaa uur waxayna ku dhowdahay dhamaadka. Mbarka Dia ayaa xidhay albaabka. Iyada oo tilmaamaysa saxda ah, waxay ku shiday toosh isla markaana aan xitaa gariirin, waxay ku bilaabtay mid ka mid ah safka hore ee laamaha. Markiiba waxaa soo degay balaawe weyn. Xerada gudaheeda, haweenku way isqarxinayeen, isweydiinayeen, oo isweydaarsadeen, sidii inay is dhiibaan
Heesaha ayaa bilaabay inay daciifiyaan ... isla markiiba waxa lagu beddelay xoogaa qufac leh oo qufac. Waxay ahayd markaa in hooyada mustaqbalka, ay hagto dareenkeeda badbaadada, albaabka si xun u garaacdo, oo, qabow hawada ah, ku orday bannaanka halkaas oo ay ku gudubtay dhoobada . Kuwa weli noolaa ma aysan dhaqaaqin. Qaarkood waxay heleen waqti ay ku afuraan: "Ha iska daa. Waxay ka marag furi doontaa taariikhdeena waxayna u sheegi doontaa carruurteenna oo usheegi doona wiilashooda farcankooda. Kuwa aan wali la aqoonsan waxay sii wadeen raadinta heesahooda codsi geesinimo ah si ay ugu sii nagaadaan naxashkan dhalaalaya. Codadka ayaa si tartiib tartiib ah u dhammaaday ... Si kedis ah, dil cabsi leh ayaa xakameysey ololka ololka. Dhismaha saqafka ayaa dushooda ku soo dhacay. Waxay ahayd aamusnaan dhimatay oo salaaman raggii goor dambe soo gaadhay inay tuulada caawiyaan. Dhamaan dumarka Nder way halligmeen. Mid mooyee.
Waagii hore waxay sheeganayaan in waqtigaas, daruuraha waaweyn ee madow ay dabooleen cirka wax walbana mugdi noqdeen. Sidii inaad u qarsato xanuunka aabayaashan, wiilashan iyo xaasaskooda, oo lagu baabi'iyo rajo beel oo aan qayladoodii, iyo ilmadoodii iyo xitaa wakhti toodii aan raalli ka noqon karin. Laga soo bilaabo maanta iyo wakhti aad u dheer, xaflad loo yaqaan "Talata Nder" ayaa laga aasaasay tuulada Nder, si loogu sharfo xusuusta halyeeyadan. Sanad walba, Talaadada ee Noofembar, wax dhaqdhaqaaq ah ma uusan carqaladeynin maalinta xuska. Oo saacado dheer, rag iyo dumar, yar iyo weynba, waxay ku xirnaayeen ogolaashahooda si ay u tukadaan oo ay u sujuudeen allabarigii haweenka Nder.
Maanta, waa la ii sheegay, tuuladan yar ee Walo waa la dayacay oo waxaa laga tegay dabiiciyan, sida xusuusta. Xusuus ma yimaado oo lagu xasuusto boggii taariikhda ee halkaas lagu qoray. Awowyaasheenii mudnaa ee Nder miyaanay mudnayn inay kafiican dan ka lahaadaan casharkan quruxda badan ee geesinimada ee ay naga tageen?
SOURCE: Boqoradda Afrika iyo geesiyaasha qurbaha madow ee Sylvia Serbin.
Taariikhda Guud ee Afrika (Volume 5)
Burburkii ilbaxnimadeenna warshadeed
Ka waran haddii dhimashadu ay ahayd marin kaliya - Documentary (2020)